20ka Cayaaryahan Ee Ugu Caawinta Badan Taariikhda Horyaalka PL-ga Iyo De Bruyne Oo Kaalinta 10aad Soo Galay – Garsoore Sports
20ka Cayaaryahan Ee…
Kevin De Bruyne ayaa bixiyay baaskii todobaadkan si uu cayaaryahan John Stones uga caawiyo goolkii furitaanka ee Manchester City kulankii ay xalay 4-0 ku xasuuqeen Crystal Palace oo Etihad Stadium marti ugu ahayd.
Goolka uu Stones Caawiyay ayaa yimid kadib markii kubbad gees-ka-laad ah uu De Bruyne soo tuuray taasoo dhinaca kale ee garoonka ugu tagtay Raheem Sterling oo durbadiiba usoo gediyay dhinaca middig ee garoonka ee uu De Bruyne ku sugnaa, umay muuqan wax halis badan leh oo ku soo food leh kooxda Crystal Palace.
Kubbad-sameeyaha reer Belgium ayaa leh awooda indho-sarcaadka ah ee uu kubbada la heli karo asxaabtiisa xilliyo ay ku jiraan xaalad wanaagsan taasina waa mid ka mid ah hubka ugu halista badan ee uu keydka ku heysto.
29 jirkan ayaa Kubbada la beegsaday aagga diilinta ganaaxa kaddib markii uu banaanka kabihiisa ku tuuray kubbad jarmo ahayd isagoo kubbada si fiican ula eegtay madaxa cayaaryahan John Stones taasoo u sahashay daafacan inuu si fudud shabaqa ula helo.
Goolkan ayaa u gacan geliyay De Bruyne caawintiisii ​​10aad ee horyaalka Premier League-ga xilli ciyaareedkan.
Wuxuu ahaa markiisii ​​76-aad ee uu caawiye ka noqdo horyaalka heerka koowaad ee England Premier League, taasoo ka dhigaysa inuu noqdo cayaaryahanka tobanaad ee ugu caawinta sarreeya taariikhda Premier League-ga iyadoo kaalintaasi ay wadaagaan halyeeyga kooxaha Manchester United iyo Tottenham Hotspur Teddy Sherringham.
Sooyaalka taariikhda waxaanu ku xusuusanaa qaar ka mid ah kubbad-sameeyayaashii ugu fiicnaa oo bandhigyo ilqabad leh kusoo bandhigaya garoomada kubbada cagta horyaalka Premier League-ga Ingiriiska, halka sidoo kale haatan ay jiraan cayaartooyo cajiib ah sida Kevin De Bruyne oo joogteynaya inay ka cayaaraan heerka ugu sarreeya.
Haddaba waxaan idiin heynaa 20kii cayaaryahan ee ugu gool-caawinta badnaa taariikhda horyaalka Premier League.
Fiiri qiimeynta hoose ….
Nolberto Solano (62)
Caawinadii ugu badnaa ee Norberto Solano ayaa yimid xilligiisii kooxda Newcastle United.
Cayaaryahankan ayaa sidoo kale qeyb weyn ka geystay goolal la dhaliyay xilliyadii uu u safanayay kooxaha Aston Villa iyo West ham.
Christian Eriksen (62)
Christian Eriksen, kubbad-sameeyaha-guud ee kooxda Tottenham oo qeyb lixaad leh ka qaatay bandhigyada kooxda Spurs lix sano iyo bar oo uu qeyb ka ahaa ayaa si dhuumaaleysi ah usoo galay liiskan, waxaana uu weli awood u leeyahay in caawintiisa uu kor u qaado haddii uu doorto inuu soo afjaro waqtiga xun ee uu ku qaadanayo kooxda Inter Milan isagoo kusoo laabanaya horyaalka Premier League-ga.
Alan Shearer (64)
Gooldhaliyaha ugu sarreeya taariikhda Premier League-ga ayaa sidoo kale ku guuleeystay inuu wax yar u dhigo asxaabtiisa intii uu ku guda jiray xirfadiisa cajiibka ee horyaalka PL-ga.
Matt Le Tissier (64)
Booska Matt Le Tissier ee liiskaan ayaa qeexayaa sababta uu u yahay cayaaryahankii ugu fiicnaa taariikhda kooxda Southampton.
Gareth Barry (64)
Cayaaryahankii hore ee kooxaha Everton iyo Man City, ayaa badanaa la arki jiray isagoo kubbad koroos ah kasoo tuuraya geeska bidix ee garoonka. Hal abuurkiisa ayaa ahaa mid kamid ah awoodaha ugu sarreeya ee cayaartiisa, taasoo u sahashay inuu qeyb ka ahaado 20ka cayaaryahan ee ugu sarreysa gool-caawinta horyaalka Premier League-ga.
Darren Anderton (68)
Mid ka mid ah cayaartoydii ugu fiicneyd ee ku labista funaanada kooxda Tottenham sagaashamaadkii ayaa caawiyay tiro badan oo goolal ah.
14.Ashley Young (69)
Tayada koroosyada Ashley Young ayaa kamid ahaa awoodihiisa muuqda ee cayaarta, isagoo gool-caawinno badan ku urursaday xilliyadiisii West ham, Aston Villa iyo Manchester United.
Andy Cole (73)
Weeraryahankii hore ee xulka qaranka Ingiriiska Andy Cole ayaa gool caawinno badan urursaday xirfadiisa cayaareed ee horyaalka Premier league-ga, waayo lagu xasuusto ayuu kusoo qaatay kooxda Manchester United.
Thierry Henry (74)
Cayaaryahanka ugu goolasha badan taariikhda kooxda Arsenal ayaa sidoo kale ahaa deeqsi goolasha caawiya, isagoo magiciisa ku qoray 20-ka ugu caawinta-sarreysa taariikhda PL-ga.
Teddy Sherringham (76)
Mid kamid ah weeraryahanadii ugu halista badnaa horyaalka, Teddy Sherringham ayaa waqtigiisii horyaalka PL-ga sidoo kale ahaa gool caawiye cajiib ah isagoo liiskan magaciisa ku qoray.
Kevin De Bruyne (76)
De Bruyne wuxuu sii joogi doonaa Manchester City dhowr xilli cayaareed oo kale, Iyadoo la eegayo bandhigyadiisa muuqda ee joogtada ah, shaki kuma jiro inuu sii wadi doono inuu kor ugu kaco liiskan.
Laad-xor dhaliyaha ugu fiican taariikhda Premier League , David Beckham ayaa lahaa awood cajiib ah oo uu kubbada geeska midig uga keeni jiray cayaaryahannada xerada ganaaxa ku jira, taasoo qeyb weyn ka ahayd in helo 80 caawin waayihiisii horyaalka.
Haddii uu kahor iman lahaa u dhaqaaqistiisii kooxda Real Madrid, waxaa hubaal ah in David Beckham uu magaciisa ku qori lahaa caawinaad intaan ka badan.
James Milner (85)
Cayaaryahanka ugu caawinta sarreeya abid ee haatan ka cayaara horyaalka, James Milner ayaa si joogta ah u cawiinayay goolasha xilliyadiisii Manchester City, Aston Villa , Leeds United iyo Liverpool oo uu haatan ka tirsanyahay.
Steven Gerrard (92)
Steven Gerrard waxaa lagu xusuusan doonaa dadaalkii ilqabadka lahaa ee uu ka waday qadka-dhexe ee kooxda Liverpool isagoo goolal qiimo leh la imanayay kulamada kooxaha waaweyn, sidoo kale wuxuu ahaa kubbad-sameeye fursad u siinaya asxaabtiisa inay goolal dhaliyaan.
David Silva (93)
El Mango (gacanka) ayay ku naaneesi jireen taageerayaasha kooxda Manchester City, David Silva waa mid kamid ah kubbad-sameeyayaashii ugu fiicnaa horyaalka Premier League ga.
Dennis Bergkamp (94)
Dennis Bergkamp maskax furnaantiisa iyo caqli badnidiisa ayaa ka caawisay inuu helo meelo-bannaan oo uu kubbado kuwa kale ula muuqatay kuwo dhintay uu ka dhex saari jiray, waxaana loo tixgeliyaa inuu yahay mid kamid ah kubbad-sameeyayaashii ugu cajiibsanaa ee horyaalka Premier League ga soo mara.
Frank Lampard (102)
Sida Steven Gerrard , Lampard isna wuxuu ahaa cayaaryahan cajiib ah, wuxuu ogaa sida uu kubbada ula helayo asxaabtiisa iyagoo ku jira xaalad wanaagsan taasoo ka caawisay inuu soo galo liiska 5ta cayaaryahan ee ugu caawinta sarreysa taariikhda PL-ga.
Gooldhaliye ka cayaari kara khadka dhexe, cayaaryahan deedaal badan ahna caawiye cajiib ah oo yaqaana marinka kubbadaha halista leh, Weyne Rooney ayaa waayo cajiib ah kusoo qaatay kooxda Manchester United isagoo liiskan kasoo galay kaalinta 3aad maadaama uu deeqsi ka ahaa goolal badan.
Awoodiisa cayaareed ayaa lagu xasuusan karaa caawintii caajiibka ahayd ee uu cayaar daqiiqad ka hadhsantahay ka sameeyay horyaalka MLS mareykanka.
Halkan hoose ka daawo caawinta.
Celebrating @WayneRooney‘s retirement with our 5 favorite plays during his time in MLS. pic.twitter.com/ShfERdopoG
Cesc Fabregas (111)
Waayihiisii Arsenal iyo markii dambe oo uu Chelsea ku biiray kaddib kooxda Barcelona oo uu waqti kooban ka tirsanaa, Cesc Fabregas ayaa ahaa macalin ku xeeldheer kubbad-qaabeenta qadka dhexe.
Waxaa la dhihi karaa waa waxa ugu dhow oo ay taageerayaasha Premier League-ga ka arkeen Xavi ama Iniesta oo horyaalkan ka cayaaraya.
Ryan Giggs (162) – Cayaaryahanka ugu caawinta sarreeya taariikhda Premier League-ga
Haddii uu kubada ka tuurayay khadka dhexe amaba uu ka soo jeexayay geesaha, Ryan Giggs wuxuu lahaa lug-bidix oo aad u tayo sarreysa wuxuuna u adeegsaday inuu ku caawiyo 162 gool intii uu ku guda jiray xirfadiisa ciyaareed ee kooxda Manchester United.
Suuqa iyo Saakay: Man United oo dalab Ka gudbineysa Medina, Arsenal Oo loo diiday Buendia, Lukaku oo ku gacanseyray City iyo Wararkii ugu dambeeyay ee suuqa lagu waabariistay.